Izisebenzi ZikaLoliwe Ezaxotshwayo Ziyala Ukusuka Ezindlini zeNkampani
Izisebenzi zikaloliwe ezixotshwe umsebenzi inyanga ezintathu ezedluleyo, ziyala ukuphuma ezindlini zalenkampani zisithi kumele ziqale ziphiwe imali yazo anduba ziphume.
Lezi zisebenzi zixotshwe umsebenzi ngemva kwesinqumo sedale leHigh Court, esipha umqhatshi amandla wokwanelisa ukuzimisa umsebenzi, ngokuzinikeza inyanga ezintathu zenotice kusetshenziswa isigaba somthetho wezisebenzi wakudala.
Unkosikazi Mandy Sengu ungomunye walezi zisebenzi, ezedlula kancane amakhulu ayisithupha, ezamiswa umsebenzi yilenkamapani kaloliwe ngemva kokuphiwa incwadi zisaziswa ngalokho ngemva.
Baphila nzima asebaxotshwa umsebenzi laba, belokhe bengayitholi laleyo mali yenyanga ezintathu lanxa linkampani kaloliwe yayithembisile ukuba izabanika izimali zabo ngokushesha kuveza unkosikazi Sengu.
Imizamo yokukhulumisana lenkokheli lokhe isehlula, unkosikazi Sengu ethi banikezwa izizatho ezehlukeneyo sikhathi sonke, lamuhla lokhu kube ngesifanayo,kuthiwa iziphathamandla zisemhlanganweni. Uthi kunje, sebexotshwa ezindlini zenkampani, lapho bebehlala khona belindele ukutholiswa imali zabo okubalisa abazisebenzela kunyanga zangemuva alokhe bezithenjiswa kodwa bengazitholi.
Imizamo yokukhulumisana lophethe uhlangothi lwezisebenzi, umnumzana Gilbert Ndlovu, yehlule, belukhala kokuphela kungela osabelayo.
Ubufakazi obutholwe yiStudio Seven, buveza ukuba lanxa abenkampani le bekhalaza kokuphela bethi kabalayo imali yokunikeza izisebenzi okugoqela ezaxotshwa umsebenzi, iziphathamandla zona zihola ngengowane, zinikana imali engakhitshelwa mthelo.
Yena uNdlovu uhola inkulungwane phose ezine-$3,544,ophethe uhlangothi lwezemali, umnumzana Bhule ethola eyedlula kancinyane inkulungwane ezine- $4 147 kuti osaphethe isikhundla sikamqondisi wale inkampani kaloliwe, umnumzana Lewis Mukwada yena ethola phose inkulungwane eziyisithupha-$5 732 .
Udaba lwezisebenzi zikaloliwe ezalela ezindlini zenkampani